ဖြိုးမြတ်အောင် ရဲ့ ဆန်းကြယ်တဲ့ အကြောင်းတရား.....
Winner ဖြစ်ရင် ဘုရားထီးတင်မယ်.. ဆယ်လီတော်တော်များများ ဒီလိုပြောတတ်ကြတာပဲ။ သို့သော် ဖြိုးမြတ်အောင် ရဲ့ ဆန်းကြယ်တဲ့ အကြောင်းတရား
Vote7ဖြေ။ ။ ဘုရားထီးတင်မယ်
ကျွန်တော့်မှာ တအံ့တဩတော့မဖြစ်မိ။ ဆယ်လီတော်တော်များများ ဒီလိုပြောတတ်ကြတာပဲ။ သို့သော် ဖြိုးမြတ်အောင်ရဲ့ဘုရားထီးတင်မယ် ပြောစကားနောက်မှာ လေးနက်သော ဆန်းကြယ်သော အကြောင်းတရားတွေရှိမှန်း တဖြည်းဖြည်း
သိလာရသောအခါ . . . . .
(B) Vote7ဖြိုးမြတ်အောင်အကြောင်း ရယ်စရာတစ်ခုဦးစွာပြောလိုပါသည်။ကိုဖြိုးတို့အိမ်က တက္ကသိုလ်နားမှာဆိုတော့ ကျောင်းသားတွေ ဥဒဟိုသွားလာနေကြသည်။ညဘက်ဆို အဆောင်တွေဆီ ကျောင်းသားတွေဂစ်တာတီးထွက်တာတွေ့တော့ ကိုဖြိုးကအားကျရင်ခုန်မိသည်။
သူနဲ့သူငယ်ချင်း(နောင်အခါဗိုလ်ချုပ်သီချင်းရေးပေးသူတေးရေးယူဇော)နှစ်ယောက် အဆောင်တွေမှာ ညဘက်သီချင်းလိုက်ဆိုကြသည်။လေးဖြူသီချင်းဆိုတာကောင်းလို့ အဆောင်သူမမတစ်စုသူ့အိမ်သို့ ရောက်လာဖူးသည်။လူကိုတွေ့တော့မှကလေးအရွယ်လေး။သူတီးတဲ့ဂစ်တာက သူ့ထက်အရပ်ရှည်သေးသည်။အဲ့ဒီတုန်းက ၁၂နှစ်သား။
ဦးသိန်းတန်ရဲ့ဘိုးရင်း777မှာ ဇနဲ့ ချာတိတ်။လောကကြီးဆီ အလုပ်တစ်ခုတည်းလုပ်ဖို့ ရောက်လာသူတွေရှိတတ်သည်။မိုက်ကယ်အိန်ဂျလိုက ပန်းပုထုဖို့။ဗန်ဂိုးက ပန်းချီဆွဲဖို့။ကိုဖြိုးက သီချင်းပဲ။
(C)ကျွန်တော်က fbထဲဟိုရေးဒီရေးပေါ့လေ။မြို့မှာ ဂီတကဗျာအားဖြင့် လူငယ်တွေနဲ့ခင်မင်ရတဲ့အထဲကိုဖြိုးလည်းပါဝင်လေသည်။ကိုဖြိုးက သီချင်းစာသားတွေကို စစ်စစ်ပေါက်ပေါက်မေးတတ်သည်။ခတ္တာသီချင်းအကြောင်းလည်းသူမေးဖူးသည်။သရဝဏ်ကဘာလဲ။မင်းလွင်ပုန်းညှက်ကဘာလဲ စသဖြင့်။ဆရာစိုင်းခမ်းလိတ်ရဲ့ ok0122l အကြောင်း ထူးအိမ်သင်ရဲ့ဝေးသွားတဲ့အခါအကြောင်းစသဖြင့်။
Bertie Higginsရဲ့Casablanca စာသားတွေတောင်းယူဖူးသည်။ယနေ့မြန်မာဂီတလောကကMusicတွေတိုးတက်လာပြီးwordsတွေမတိုးတက်လာတာ ဂီတသမားတွေစာပေအားနည်းလို့ဖြစ်နိူင်ကြောင်း သူသုံးသပ်ပြဖူးသည်။ဇော်ဝင်းထွဋ်က ၃တန်းထဲကမန္တလေးမှာ ရည်မွန်တီးဝိုင်းနဲ့ ရီကောဒင်းလုပ်တာဆိုခပိုက်ဆံရနေကြောင်းသူ့ကိုပြောပြတော့ သူ့မျက်လုံးတွေတောက်ပလာနေခဲ့သည်။
ကိုဖြိုးပုံက ဆံပင်နီဆေးသွင်း နားကွင်းနဲ့ပိန်ကပ်ကပ် လက်ပြင်ကုန်းကုန်း။လူငယ်ဆိုတော့ အရက်သောက်မှာပဲ ဆေးချမှာပဲကျွန်တော်ထင်ခဲ့ဖူးသည်(ကိုဖြိုးခွင့်လွှတ်ပါ)စင်ပေါ်မှာ ခုန်ပေါက်နေတာတွေလည်းတွေ့ခဲ့ဖူးသည်ကိုး။
ကိုဖြိုးနဲ့တဖြည်းဖြည်းရင်းနှီးလာမှ သူကအရက်မသောက် ဆေးမချ ထမင်းကိုပဲကြော်နဲ့ဆီဆမ်းစားတတ်သူဆိုတာသိလာရသည်။ပြီးတော့သူက ပဌန်းရွတ်သည်။တရားထိုင်သည်။သူ့စရိုက်နဲ့သူ့ပုံက ကီးလွဲနေသလိုလို။
လွန်ခဲ့သော ၂၆နှစ်ကိုခဏပြန်သွားရအောင်. . .
ထိုဘုရားဖြူလေးကိုထီးတင်ဖို့စီစဉ်ကြရာ စီစဉ်တိုင်းပျက်နေခဲ့သည်။မြို့ပေါ်ကပိုက်ဆံရှိသူများထီးတင်ဖို့ အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားသော်လည်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အထမမြောက်ခဲ့။တစ်ခုသောမိုးညမှာ ဂေါပကလူကြီးတစ်ယောက်အိပ်မက်မြင်မက်လေသည်။အိပ်မက်ထဲ ဘုန်းကြီးတစ်ပါးက “အေးမောင်မိသားစုကို ထီးတင်ခိုင်း”တဲ့
မိုးလင်းတော့ ဦးအေးမောင်အိမ်သို့ အကျိုးအကြောင်းပြောရန် ဂေါပကလူကြီးသွားလေသည်။ထိုနေ့က July9ရက်နေ့. . .ဟင်္သာတမြို့မှာ နှစ်၅၀အတွင်းမိုးရေချိန်အများဆုံးအဖြစ် သတင်းထဲပါသောနေ့။
ထိုနေ့ကား ဦးအေးမောင် ဒေါ်သန်းသန်းမြင့်တို့၏သား မောင်ဖြိုးမြတ်အောင်မွေးဖွားသန့်စင်သောနေ့တည်း။
ဦးအေးမောင်မိသားစုက အလှူအတန်းရက်ရောသူတွေ။ထီးတင်ဖို့တာဝန်ကို မဆိုင်းမတွယူခဲ့ရာအောင်မြင်ခဲ့လေသည်။ထိုစဉ်ကဦးအေးမောင်က ကိုယ်ပိုင်ကုန်ကားနဲ့အုတ်အရောင်းအဝယ်ကောင်းနေတော့ စီးပွားရေးမဆိုးလှချိန်။
(E)ဖြိုးမြတ်အောင်သက်တမ်းတလျှောက် သူ့အိမ်မှာထူးထူးဆန်းဆန်းအဖြစ်အပျက်တွေ ကြုံတွေ့ရဖူးသည်။
သူ့ဖခင်ရဲ့ ကုန်ကားဘက်ထရီအိုးကြီးပျောက်သွားရာ တစ်ပတ်လောက်ကြာမှ အိမ်ရှေ့သို့အလိုလိုပြန်ရောက်နေဖူးသည်။ဖြိုးမြတ်အောင်ဖျားပြီးသတိလစ်နေတုန်း လူတစ်ယောက်ရောက်လာပြီး ဆေးတိုက်ရာ ချက်ချင်းထထိုင်ခဲ့ဖူးသည်။
လေးတန်းကျောင်းသားအရွယ်ကအညိုဝတ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးက”ဒီကလေးက သိုက်ကလာတာ တစ်နေ့နိူင်ငံကျော်ကြီးဖြစ်လာမှာ”ဟု ဗေဒင်ဟောသွားဖူးသည်။
ကိုဖြိုးကတော့ သိုက်တွေဘာတွေသိပ်မယုံ။သို့သော်လည်းအဆိုပါ အညိုဝတ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ပြီးနောက်ပိုင်း ဘုရားတရားလုပ်ချင်စိတ်တွေပေါ်လာခဲ့သည်။ဘုရားစာအုပ်တွေလည်း ဖတ်လာခဲ့သည်။
(F) ကိုဖြိုးအရွယ်ရောက်လာတော့ ပဉ္ဇင်းတက်ပေးဖို့ဦးအေးမောင်မိသားစု စဉ်းစားကြသည်။လက်ထဲငွေပိုငွေလျှံက သိပ်မရှိ။ဒေါ်သန်းသန်းမြင့်နဲ့ကိုဖြိုးတို့သားအမိနှစ်ယောက် ကိုးနဝင်း(ဘုရားဖြူလေး)တွင် အဓိဌာန်ဖြင့်၁၀၈ရက်ပုတီးစိတ်ကြသည်။အဓိဌာန်အောင်ခဲ့ပါသည်။တိုက်ဆိုင်တယ် ဆိုချင်ဆိုပါ။
အုတ်ဖုတ်တဲ့ခြံထဲက တောင်ပို့ကိုတူးရင်း ငွေဒဂါင်္း၁၀၅ ပြားရလိုက်လေသည်။ဦးသိန်းဟန်ရွှေဆိုင်မှာရောင်းတော့ ထိုအချိန်ပိုက်ဆံ ၇သိန်းလောက်ရလိုက်လေသည်။ကိုဖြိုးကပဉ္ဇင်း ညီငယ်ဘချစ်ကကိုရင် အခြားဆွေမျိုးတွေပါ သာသနာ့ဘောင်ဝင်ကြလေသည်။
(G) ဖခင်ဦးအေးမောင် ကွယ်လွန်ချိန်မှာတော့ သူတို့မိသားစု စီးပွားရေးနိမ့်ကျလာခဲ့သည်။ကုန်ကားကိုရောင်းလိုက်ရသည်။ဂွန်ဒေါင်းလေးဝယ်ထောင်သေးသည်။အဆင်မပြေ။နောက်တော့ဂွန်ဒေါင်းကိုခြောက်သိန်းခွဲနဲ့ရောင်းလိုက်သည်။ထိုငွေအပါအ ဝင် ဖခင်ရှိချိန်အပျော်ဆိုတီးခဲ့သော ဆောင်းဘောက်တွေ တူရိယာတွေကိုဘုရားဖြူလေးသို့လှူဒါန်းခဲ့လေသည်။
ဤသို့ဖြင့် မိခင်ကမုန့်ဟင်းခါးဆိုင်ထွက် ညီငယ် က သူများကုန်ကားမောင်း ကိုဖြိုးကဂီတအလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်ရင်း နွမ်းပါးသောနေ့ရက်တွေရောက်လာခဲ့လေသည်။
အေးမောင်မိသားစုတင်ခဲ့သောထီးတော်မှာ ၂၆နှစ်ရှိခဲ့လေရာ ဟောင်းနွမ်းပျက်စီးစပြုလာသည်။ဂေါပကအဖွဲ့က ဒေါ်သန်းသန်းမြင့်ကိုတိုင်ပင်သည်အလှူအတန်းဆို လက်မနှေးတတ်သူဒေါ်သန်းသန်းမြင့်က တစ်နှစ်လောက်အချိန်ပေးပါ သူလှူမည်လို့ကတိပေးလိုက်လေသည်။သူမစိတ်ကူးက တစ်နှစ်အတွင်းသူ့ခြံကိုရောင်းပြီးဘုရားထီးတင်မည် ပေါ့။
ဘုရားထီးတင်မယ်ဆိုသောစကားကို ကိုဖြိုးကခပ်ပေါ့ပေါ့ပြောလိုက်တာမဟုတ်မှန်းသိလာရသောအခါ ကျွန်တော့်မှာကြက်သီးမွေးညှင်းထမိကြောင်းဝန်ခံအပ်ပါသည်။
(I) ချစ်သောမိတ်ဆွေရေ. . .
ဟင်္သာတမြို့ကိုရောက်ခဲ့သော် မြို့ပတ်လမ်းမှာကိုးနဝင်းစေတီ(ဘုရားဖြူလေး)ကိုအေးမောင်မိသားစုရဲ့အလှူ ထီးတော်အဟောင်းနဲ့အတူဖူးမြင်နိူင်ပါသည်။
မကြာမီကာလတွင် ဘုရားထီးတော်အသစ်ကိုကိုဖြိုးတို့(အေးမောင်မိသားစု)က လှူဒါန်းခွင့်ကြုံရလိမ့်မည်ကို ကျွန်တော်ကမျှော်လင့်ရင်ခုန်မိတောသည်။
အဲဒီအခါ ဘုရားထီးတင်ပွဲမှာ ဟင်္သာတမုန့်ဟင်းခါးစားကြွဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေမိတ်ဆွေတို့ရေ. . .
(ဖြိုးမြတ်အောင် အားပေးသူများshare copy လုပ်နိူင်ပါတယ်)
ကြာသပတေးည ၉း၀၀နာရီတိုင်းlive (နောက်တစ်ဆင့်မှ ဆက်ရေးမယ်ကိုဖြိုးရေ)
Winner ဖွဈရငျ ဘုရားထီးတငျမယျ.. ဆယျလီတျောတျောမြားမြား ဒီလိုပွောတတျကွတာပဲ။ သို့သျော ဖွိုးမွတျအောငျ ရဲ့ ဆနျးကွယျတဲ့ အကွောငျးတရား
Vote7ဖွေ။ ။ ဘုရားထီးတငျမယျ
ကြှနျတေျာ့မှာ တအံ့တဩတော့မဖွဈမိ။ ဆယျလီတျောတျောမြားမြား ဒီလိုပွောတတျကွတာပဲ။ သို့သျော ဖွိုးမွတျအောငျရဲ့ဘုရားထီးတငျမယျ ပွောစကားနောကျမှာ လေးနကျသော ဆနျးကွယျသော အကွောငျးတရားတှရှေိမှနျး တဖွညျးဖွညျး
သိလာရသောအခါ . . . . .
(B) Vote7ဖွိုးမွတျအောငျအကွောငျး ရယျစရာတဈခုဦးစှာပွောလိုပါသညျ။ကိုဖွိုးတို့အိမျက တက်ကသိုလျနားမှာဆိုတော့ ကြောငျးသားတှေ ဥဒဟိုသှားလာနကွေသညျ။ညဘကျဆို အဆောငျတှဆေီ ကြောငျးသားတှဂေဈတာတီးထှကျတာတှတေ့ော့ ကိုဖွိုးကအားကရြငျခုနျမိသညျ။
သူနဲ့သူငယျခငျြး(နောငျအခါဗိုလျခြုပျသီခငျြးရေးပေးသူတေးရေးယူဇော)နှဈယောကျ အဆောငျတှမှော ညဘကျသီခငျြးလိုကျဆိုကွသညျ။လေးဖွူသီခငျြးဆိုတာကောငျးလို့ အဆောငျသူမမတဈစုသူ့အိမျသို့ ရောကျလာဖူးသညျ။လူကိုတှတေ့ော့မှကလေးအရှယျလေး။သူတီးတဲ့ဂဈတာက သူ့ထကျအရပျရှညျသေးသညျ။အဲ့ဒီတုနျးက ၁၂နှဈသား။
ဦးသိနျးတနျရဲ့ဘိုးရငျး777မှာ ဇနဲ့ ခြာတိတျ။လောကကွီးဆီ အလုပျတဈခုတညျးလုပျဖို့ ရောကျလာသူတှရှေိတတျသညျ။မိုကျကယျအိနျဂလြိုက ပနျးပုထုဖို့။ဗနျဂိုးက ပနျးခြီဆှဲဖို့။ကိုဖွိုးက သီခငျြးပဲ။
(C)ကြှနျတျောက fbထဲဟိုရေးဒီရေးပေါ့လေ။မွို့မှာ ဂီတကဗြာအားဖွငျ့ လူငယျတှနေဲ့ခငျမငျရတဲ့အထဲကိုဖွိုးလညျးပါဝငျလသေညျ။ကိုဖွိုးက သီခငျြးစာသားတှကေို စဈစဈပေါကျပေါကျမေးတတျသညျ။ခတ်တာသီခငျြးအကွောငျးလညျးသူမေးဖူးသညျ။သရဝဏျကဘာလဲ။မငျးလှငျပုနျးညှကျကဘာလဲ စသဖွငျ့။ဆရာစိုငျးခမျးလိတျရဲ့ ok0122l အကွောငျး ထူးအိမျသငျရဲ့ဝေးသှားတဲ့အခါအကွောငျးစသဖွငျ့။
Bertie Higginsရဲ့Casablanca စာသားတှတေောငျးယူဖူးသညျ။ယနမွေ့နျမာဂီတလောကကMusicတှတေိုးတကျလာပွီးwordsတှမေတိုးတကျလာတာ ဂီတသမားတှစောပအေားနညျးလို့ဖွဈနိူငျကွောငျး သူသုံးသပျပွဖူးသညျ။ဇျောဝငျးထှဋျက ၃တနျးထဲကမန်တလေးမှာ ရညျမှနျတီးဝိုငျးနဲ့ ရီကောဒငျးလုပျတာဆိုခပိုကျဆံရနကွေောငျးသူ့ကိုပွောပွတော့ သူ့မကျြလုံးတှတေောကျပလာနခေဲ့သညျ။
ကိုဖွိုးပုံက ဆံပငျနီဆေးသှငျး နားကှငျးနဲ့ပိနျကပျကပျ လကျပွငျကုနျးကုနျး။လူငယျဆိုတော့ အရကျသောကျမှာပဲ ဆေးခမြှာပဲကြှနျတျောထငျခဲ့ဖူးသညျ(ကိုဖွိုးခှငျ့လှတျပါ)စငျပျေါမှာ ခုနျပေါကျနတောတှလေညျးတှခေဲ့ဖူးသညျကိုး။
ကိုဖွိုးနဲ့တဖွညျးဖွညျးရငျးနှီးလာမှ သူကအရကျမသောကျ ဆေးမခြ ထမငျးကိုပဲကွျောနဲ့ဆီဆမျးစားတတျသူဆိုတာသိလာရသညျ။ပွီးတော့သူက ပဌနျးရှတျသညျ။တရားထိုငျသညျ။သူ့စရိုကျနဲ့သူ့ပုံက ကီးလှဲနသေလိုလို။
လှနျခဲ့သော ၂၆နှဈကိုခဏပွနျသှားရအောငျ. . .
ထိုဘုရားဖွူလေးကိုထီးတငျဖို့စီစဉျကွရာ စီစဉျတိုငျးပကျြနခေဲ့သညျ။မွို့ပျေါကပိုကျဆံရှိသူမြားထီးတငျဖို့ အကွိမျကွိမျကွိုးစားသျောလညျး အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ အထမမွောကျခဲ့။တဈခုသောမိုးညမှာ ဂေါပကလူကွီးတဈယောကျအိပျမကျမွငျမကျလသေညျ။အိပျမကျထဲ ဘုနျးကွီးတဈပါးက “အေးမောငျမိသားစုကို ထီးတငျခိုငျး”တဲ့
မိုးလငျးတော့ ဦးအေးမောငျအိမျသို့ အကြိုးအကွောငျးပွောရနျ ဂေါပကလူကွီးသှားလသေညျ။ထိုနကေ့ July9ရကျနေ့. . .ဟင်ျသာတမွို့မှာ နှဈ၅ဝအတှငျးမိုးရခြေိနျအမြားဆုံးအဖွဈ သတငျးထဲပါသောနေ့။
ထိုနကေ့ား ဦးအေးမောငျ ဒျေါသနျးသနျးမွငျ့တို့၏သား မောငျဖွိုးမွတျအောငျမှေးဖှားသနျ့စငျသောနတေ့ညျး။
ဦးအေးမောငျမိသားစုက အလှူအတနျးရကျရောသူတှေ။ထီးတငျဖို့တာဝနျကို မဆိုငျးမတှယူခဲ့ရာအောငျမွငျခဲ့လသေညျ။ထိုစဉျကဦးအေးမောငျက ကိုယျပိုငျကုနျကားနဲ့အုတျအရောငျးအဝယျကောငျးနတေော့ စီးပှားရေးမဆိုးလှခြိနျ။
(E)ဖွိုးမွတျအောငျသကျတမျးတလြှောကျ သူ့အိမျမှာထူးထူးဆနျးဆနျးအဖွဈအပကျြတှေ ကွုံတှရေ့ဖူးသညျ။
သူ့ဖခငျရဲ့ ကုနျကားဘကျထရီအိုးကွီးပြောကျသှားရာ တဈပတျလောကျကွာမှ အိမျရှသေို့အလိုလိုပွနျရောကျနဖေူးသညျ။ဖွိုးမွတျအောငျဖြားပွီးသတိလဈနတေုနျး လူတဈယောကျရောကျလာပွီး ဆေးတိုကျရာ ခကျြခငျြးထထိုငျခဲ့ဖူးသညျ။
လေးတနျးကြောငျးသားအရှယျကအညိုဝတျပုဂ်ဂိုလျတဈဦးက”ဒီကလေးက သိုကျကလာတာ တဈနနေိူ့ငျငံကြျောကွီးဖွဈလာမှာ”ဟု ဗဒေငျဟောသှားဖူးသညျ။
ကိုဖွိုးကတော့ သိုကျတှဘောတှသေိပျမယုံ။သို့သျောလညျးအဆိုပါ အညိုဝတျပုဂ်ဂိုလျနဲ့တှပွေီ့းနောကျပိုငျး ဘုရားတရားလုပျခငျြစိတျတှပေျေါလာခဲ့သညျ။ဘုရားစာအုပျတှလေညျး ဖတျလာခဲ့သညျ။
(F) ကိုဖွိုးအရှယျရောကျလာတော့ ပဉ်ဇငျးတကျပေးဖို့ဦးအေးမောငျမိသားစု စဉျးစားကွသညျ။လကျထဲငှပေိုငှလြှေံက သိပျမရှိ။ဒျေါသနျးသနျးမွငျ့နဲ့ကိုဖွိုးတို့သားအမိနှဈယောကျ ကိုးနဝငျး(ဘုရားဖွူလေး)တှငျ အဓိဌာနျဖွငျ့၁၀၈ရကျပုတီးစိတျကွသညျ။အဓိဌာနျအောငျခဲ့ပါသညျ။တိုကျဆိုငျတယျ ဆိုခငျြဆိုပါ။
အုတျဖုတျတဲ့ခွံထဲက တောငျပို့ကိုတူးရငျး ငှဒေဂါင်ျး၁၀၅ ပွားရလိုကျလသေညျ။ဦးသိနျးဟနျရှဆေိုငျမှာရောငျးတော့ ထိုအခြိနျပိုကျဆံ ရသိနျးလောကျရလိုကျလသေညျ။ကိုဖွိုးကပဉ်ဇငျး ညီငယျဘခဈြကကိုရငျ အခွားဆှမြေိုးတှပေါ သာသနာ့ဘောငျဝငျကွလသေညျ။
(G) ဖခငျဦးအေးမောငျ ကှယျလှနျခြိနျမှာတော့ သူတို့မိသားစု စီးပှားရေးနိမျ့ကလြာခဲ့သညျ။ကုနျကားကိုရောငျးလိုကျရသညျ။ဂှနျဒေါငျးလေးဝယျထောငျသေးသညျ။အဆငျမပွေ။နောကျတော့ဂှနျဒေါငျးကိုခွောကျသိနျးခှဲနဲ့ရောငျးလိုကျသညျ။ထိုငှအေပါအ ဝငျ ဖခငျရှိခြိနျအပြျောဆိုတီးခဲ့သော ဆောငျးဘောကျတှေ တူရိယာတှကေိုဘုရားဖွူလေးသို့လှူဒါနျးခဲ့လသေညျ။
ဤသို့ဖွငျ့ မိခငျကမုနျ့ဟငျးခါးဆိုငျထှကျ ညီငယျ က သူမြားကုနျကားမောငျး ကိုဖွိုးကဂီတအလုပျကိုလုပျကိုငျရငျး နှမျးပါးသောနရေ့ကျတှရေောကျလာခဲ့လသေညျ။
အေးမောငျမိသားစုတငျခဲ့သောထီးတျောမှာ ၂၆နှဈရှိခဲ့လရော ဟောငျးနှမျးပကျြစီးစပွုလာသညျ။ဂေါပကအဖှဲ့က ဒျေါသနျးသနျးမွငျ့ကိုတိုငျပငျသညျအလှူအတနျးဆို လကျမနှေးတတျသူဒျေါသနျးသနျးမွငျ့က တဈနှဈလောကျအခြိနျပေးပါ သူလှူမညျလို့ကတိပေးလိုကျလသေညျ။သူမစိတျကူးက တဈနှဈအတှငျးသူ့ခွံကိုရောငျးပွီးဘုရားထီးတငျမညျ ပေါ့။
ဘုရားထီးတငျမယျဆိုသောစကားကို ကိုဖွိုးကခပျပေါ့ပေါ့ပွောလိုကျတာမဟုတျမှနျးသိလာရသောအခါ ကြှနျတေျာ့မှာကွကျသီးမှေးညှငျးထမိကွောငျးဝနျခံအပျပါသညျ။
(I) ခဈြသောမိတျဆှရေေ. . .
ဟင်ျသာတမွို့ကိုရောကျခဲ့သျော မွို့ပတျလမျးမှာကိုးနဝငျးစတေီ(ဘုရားဖွူလေး)ကိုအေးမောငျမိသားစုရဲ့အလှူ ထီးတျောအဟောငျးနဲ့အတူဖူးမွငျနိူငျပါသညျ။
မကွာမီကာလတှငျ ဘုရားထီးတျောအသဈကိုကိုဖွိုးတို့(အေးမောငျမိသားစု)က လှူဒါနျးခှငျ့ကွုံရလိမျ့မညျကို ကြှနျတျောကမြှျောလငျ့ရငျခုနျမိတောသညျ။
အဲဒီအခါ ဘုရားထီးတငျပှဲမှာ ဟင်ျသာတမုနျ့ဟငျးခါးစားကွှဖို့ ဖိတျချေါပါရစမေိတျဆှတေို့ရေ. . .
(ဖွိုးမွတျအောငျ အားပေးသူမြားshare copy လုပျနိူငျပါတယျ)
ကွာသပတေးည ၉းဝဝနာရီတိုငျးlive (နောကျတဈဆငျ့မှ ဆကျရေးမယျကိုဖွိုးရေ)